Zvita 2017 - Network maRadio
musha / 2017 / Zvita
Mwedzi: December 2017
Inrico TM-7 senhare APRS chiteshi
Ingo gadza chero APRS app senge APRSDroid uye une yakanaka APRS nharembozha, uchitaura nzvimbo yako nguva dzose. Iyo Inrico TM-7 iri, pasina kukahadzika, redhiyo yakanyanyisa kuita!
Mufananidzo naKarl Hobson kubva kuFacebook Boka Network maRadio.
Changu chandinofarira Network maRadio kubva 2017
Ndakaedza maredhiyo mazhinji enetiweki. Parizvino, iyo Inrico TM-7 uye Talkpod N58 ndiwo sarudzo dzangu dzepamusoro! Ndine kunzwa kuti muna 2018, network maredhiyo ichave hombe hype yeamateur radio! Uye iwe, ndeupi waunofarira?
The Inrico TM-7 inokunda iyo yekuvandudza nharembozha. Pfungwa yakapusa-iri pachena iri gehena repfungwa! Yakasimba uye yakanyatsogadzirwa. Ndinofanira kukorokotedza Inrico kufemerwa kwavo!
The Talkpod N58 yakaburitswa mumazuva ekupedzisira egore uye ini ndatova ne100% kugutsikana. Kutanga, ine dhizaini yazvino. Chechipiri, iyo odhiyo mhando inoita kuti vamwe vaYesesu kana Icom vanyanye kunzwa kunyara. Ini handina chokwadi kana Motorola ichirira zvirinani pane iyi Talkpod. Ziva kuti mawairesi aya ari kunanga misika yehunyanzvi. Iwo iwo madhaidhi, dhizaini, zvese zvakavakwa neinonakidza ruzivo uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Haisi redhiyo yakachipa kwazvo kunze uko, asi inokodzera yega yega cent!
Ndiri kufara kwazvo neiyi pfungwa nyowani uye, kubva kwandiri, iwe unogona kugara uchitarisira kuda kwangu pabasa iri nekuzvipira kwangu uye nekuedza kukuru kukupa rutsigiro rwakatanhamara. Kutenda nekuvimba kwako kwese pamwe gore rinoshamisa iri!
Ndinokuda iwe Goredzva Rakanaka rizadzikiswe nehutano, rudo uye nemari - kuti utenge mawairesi 🙂
Talkpod N58. Tora chero kupi.
Iyo itsva Talkpod N58 ichangobva kuziviswa uye yatove nyaya yekubudirira. Raira yako yuniti nhasi kubva network-radios.com or canne-rechet.shop - Pano chete iwe unogashira yakazara isina kuvhurwa Android system, ine yakajairwa ROM yakagadzirira iyo ham maapplication, saEcholink, TeamSpeak 3, Zello, nezvimwe.
Kugadzira Talkpod N58 Bvunzo Yuniti
Nhasi, ndakagamuchira yangu Talkpod N58 Kwayedza Unit. Ini ndainakidzwa chaizvo nekuisa maoko angu pairi uye kutanga kuongorora redhiyo.
Chikwata changu kubva kuTalkpod chakangoita bvunzo nekukurumidza isati yatumira kwandiri ndokukanganwa kuchinja mutauro, saka ndakawana radio muChina.
Sezvo ini ndisinganzwisise Chinese, zvainge zvakandiomera kuti ndiwane chaiyo menyu yekuchinja marongero kudzokera kuChirungu. Zvisinei, ndakaona zviri nyore kugadzira fekitori, izvo zvandakaita.
Matambudziko akatanga. (Ini ndanga ndichivatarisira - ichi chikamu chekuyedza)
Chigadzirwa hachikwanise kunyoresa kune anoshanda weGMM. Ini ndaigona kuvatsvaga, ndione rondedzero yevanoshanda, asi ndisingakwanise kunyoresa, saka iri raisave dambudziko redhiyo module. Iyo SIM kadhi yaive yakanyatso kuiswa mune iyo slot uye yaizivikanwa neiyo inoshanda system. Ini ndanga ndisingakwanise kunyoresa. Ini ndaive nepfungwa yekutarisa iyo IMEI. Ingo daira * # 06 # uye BANG! "isingazivikanwe IMEI“. Yangu fekitori reset yakadzima zvishoma zvakanyanyisa, ndinofungidzira.
Sezvo ini ndakanga ndisina kopi yakaoma yeiyo yangu yekutanga IMEI ini ndakangofunga kusimudzira chishandiso neIMEI yefoni yekare yandaive nayo, ndisisashandise. Iwe unogona zvakare kugadzira iyo nyowani IMEI mu iyi website. Heano maitiro (anoshanda kune chero Android mudziyo):
1. Dhiza * # * # 3646633 # * # * (Izvi zvinopinda mumenu yebasa)
2. Zvino, tinya pa "Kubatana".
3. Zvino tsvaga "CDS Ruzivo”Wobva wadzvanya pairi.
4. Wadaro, tarisa "Radio ruzivo"
5. Dzvanya pa "Foni Phone 1".
Pinda iyo IMEI seinotevera: AT + EGMR = 1,7, "YAKO_IMEI"
Ongorora 1: chinja YAKO_IMEI neyako chaiyo IMEI
Tarira 2: pakati peAT uye "+" panofanirwa kuve nenzvimbo uye iyo IMEI inofanira kunge iri pakati pemakotesheni.
Cherekedza 3: kana iwe uine mbiri SIM mudziyo uye iwe uchida kuchinja iyo IMEI # 2 saka rairo nderekuti: AT + EGMR = 1,10, "YAKO_IMEI"
Kamwe kana iwo murairo watumirwa, ini ndakadzoreredza redhiyo. (Muchiitiko cheTalkpod, nekubvisa bhatiri)
Kamwe bhuti redhiyo, ini ndikawana inotevera meseji yekukanganisa sekondi imwe chete: "Zvinosuruvarisa maitiro com.android.phone yamira". Kuimisa, tinofanirwa kujekesa cache yeiyo foni app.
Kuti ndiite izvozvo, ndaifanira kuenda Zvirongwa / Mapurogiramu / Zvese / Runhare / Bvisa Dhata uye, pakupedzisira, enda ku Zvirongwa / Zuva uye Dzvanya otomatiki Nzvimbo.
Uye imwe reboot. (bvisa bhatiri)
Mushure mebhutsu, ini ndaigona kutarisa kuti IMEI yangu yanga ichishanda, uye ichishanda, uye redhiyo yakabva yangonyoreswa pamambure.
Ipapo, ndakaedza kuwedzera account yangu yeGoogle kuti ndikwanise kurodha Team Taura 3, Zello nemamwe ese maapps andinoda.
Handina kukwanisa. Pese pandinoedza kuwedzera account yangu, ndinowana meseji ichiti pane dambudziko rekubatana neGoogle services. Ndakaedza bhurawuza rakadzika uye ini ndaigona kusevha pawebhu, saka pakanga pasina dambudziko neinternet yekubatanidza. Ini ndobva ndaisa yazvino vhezheni yeGoogle Play zvakananga kubva pano.
Uye pakupedzisira, zvese zviri kushanda zvakanaka! Kutamba neyuniti mayunitsi kwakanaka, nekuti iwe unokwanisa kuwana maoko ako pavari kutanga, asi dzimwe nguva unowana rimwe basa rekuwedzera kuti vaite kuti vashande nenzira yaunoda. Zvakanaka, mumwe munhu anofanira kuita tsvina basa, saka vatengi vanozoita mushe mushe kubva kunze kwebhokisi… kazhinji! 🙂
Talkpod N58 unboxing uye kuongorora
Ndiri kufara chaizvo neiyi nyowani network redhiyo: Talkpod N58
Ndiri kushamiswa nezwi guru, ndinoreva chaizvo, LOOOOUD uye rakajeka kwazvo odhiyo yedhiraivho. Kune vanoda IRN naZello, iyi ingangove inoshamisa network network. Iyo inoshandisa 3G kana WiFi kubatana, iyo processor inokurumidza zvakakwana, uye inokwana zvakanaka paruoko rwako. Iyo ine ingangoita saizi chaiyo, huremu hwakakodzera uye handigone kurega kutaura kuti yakanaka sei.
Ndinovimba unonakidzwa nevhidhiyo pazasi.
Kana iwe uchida kupinda mune zvimwe zvakavanzika maficha, tarisa izvi chinyorwa.
RT4 yazvino fekitori firmware
Heino yazvino fekitori firmware yeiyo Radio-Tone RT4. Iyo inogadzirisa dambudziko nekureba kwenguva yebhatiri.
Yambiro: Iyo RT4 inotora maminetsi mashoma kuti itangezve mushure mekusimudzira.
Dhawunirodha firmware pano.
Inrico TM-7 socket pinout (mic) na OK8NWO
Pandinotyaira asi ndisingade tambo yakakombama ndakafunga kuyedza kugadzira kutungamira neine condenser mic yandinogona kusiya ndakamira discrete.
Ini ndakawedzera tx switch asi chaizvo sezvo ini ndichishandisa btooth tx bhatani iyo isinganyanye kudiwa asi ini ndakaiisa waya zvakadaro.
Pinouts 1 Gnd 2 Audio mu7 Tx
Izvi zvinoshanda zvirinani muZello.
Maby iwe une pinout nechekare asi inodziya yangu tambo tambo yemota. Ini ndaishandisa tambo yeethernet iyo ini yandichaisa pane steering rack / ikholamu ine mic yakatarisana neni pavhiri.
Ini ndaishandisa spare rj45 socket ndokunamira mic uye switch kwairi.
Pamwe iyi ndiyo nzira yekuchenjera yekuita izvi asi izvi zvinoshanda.
Ini ndakatarisa kuenderera pakati pemapini 1 & 7 uye kana yakapihwa mic "makiyi" pane kuramba kwe1kohm. Izvi zvinogona kuve nebasa saka ini ndinokurudzira kuita zvakafanana kana iwe ukagadzira tambo yakadai.
Saka ini ndakagadzira yechipiri RJ45 socket ine yakawedzera resistor kubva pini 7 kuti ishandure. Wobva wawedzera spare condenser mic uye inoshanda mushe.
Chipo cheRadio yeKisimusi
Nei usingabvunze Santa kune yakanakisa network redhiyo yeIRN? Iyo Talkpod N58 yave kuwanikwa yekutakura. Iva wekutanga kuve yako!
Gadzira yako wega Gobox
Gore rapera ndakaisa pamwechete VHF / UHF uye HF kuenda kits. Ndichiri kushanda, hapana chimwe cheizvi chaigona kana kusimba sezvo ini pakupedzisira ndaida kit yangu yekuenda ive. Vavariro yangu nyowani yaive yekuvaka chiteshi-che-chese-mubhokisi rakanga risina kunyanyisa kukura kana kurema.
Kana iwe ukatarisa kwakatenderedza internet iwe uchaona vanhu vazhinji vachivaka go kits mune rack kesi. Ini ndaigara ndichifarira kugadzikana uye modularity yerudzi urwu rwemakesi, asi kwete huwandu. Vazhinji vavaki isu yakazara izere saizi yuniti kesi, iyo isiri compact (ingangoita 6 ″ mativi uye 24 ″ kureba) kana isina kurema (pamusoro pe13lbs). Mushure mekuongorora michina yandakaronga kushandisa mukiti ndakaona kuti ini ndaisada yakazara yakadzika kesi. Kushandisa kesi isina kudzika kunondiponesa 18 ″ yekudzika uye kucheka huremo futi. Ndakawaridza marongedzero akati wandei emidziyo muCAD ndikaona kuti kana ndikachengeta kit yacho zvisina tsarukano (pasina SWR metres kana ekunze maina tuners, chete mutauri wekunze) Ini ndaida. Iyo 8 yuniti isina kudzika kesi yandaishandisa ndeye 6 ″ x 4 ″ x 4 ″ uye inorema 22.4lbs.
Iyo yakajairika dhizaini yeiyi purojekiti yaifanira kuve nemidziyo yese yakakwidzwa kumashefu maviri (imwe pasi uye imwe kumusoro). Mushure mekuyedza kwangu muCAD ndakaona kuti kurongeka kwakanaka kwesangano kwakawanikwa pamwe nemagetsi, kugoverwa kwesimba, uye transceiver yeHF yakaiswa pazasi. Sechikamu chesystem yekuparadzira magetsi ini ndaida kuisa otomatiki backup simba switch. Izvi zvinobvumira iyo sisitimu yemagetsi kuti inyatsochinja kubva ku AC wall / jenareta simba kune bhatiri simba. Kunyangwe zvisiri madikanwa, ichi chinhu chakanaka kuve nacho nekuti chinodzivirira redhiyo yako kubva kudzima kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita.
Izvi zvakasiya iyo VHF / UHF transceiver, mutauri, uye maSignaLinks maviri pasherufu yepamusoro. Iyo SignaLinks inopatsanurwa nemukurukuri kusiyanisa nyore nyore kuti ndechipi chinhu chakabatana neiyo redhiyo. Ndakaenda neakawanda madhijitari ekubatanidza nekuti nepo ini ndichizotadza kutenderera pane ese V / U neHF panguva imwe chete, zvinogona kubatsira zvikuru kukwanisa kuongorora zvese panguva imwe chete kana kutarisa imwe uchipfuuridzira kune imwe. Kuve nemaviri mayunitsi zvakare kunondibvumidza kuti ndisambonetseka nezvekuchinja redhiyo uye SignaLink wiring yekushanda pane iro bhendi randinoda.
Kuitira kurerutsa iyo cabling pakati peSignaLinks ne laptop yangu ndakafunga kwatiri simba reUSB hub uye kuita kuti USB hub iwanikwe kuseri kwenyaya. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kana ndiri mumunda sezvo ini ndisingafanire kusvika mune iyo kesi kuti plug mumakona tambo. Kuwedzerwa kweplate yekumusoro yekuseri kwakandipa nzvimbo yekuburitsa iyo V / U transceiver's antenna kubatana kuti ive nyore kuwana zvakare.
Ndakafunga kuti mutauri wekunze angave akakwana zvichienderana nemamiriro andakagara. Mune ino dhizaini pane yakaenzana huwandu hwenzvimbo pazasi pev / U redhiyo mutauri kubvumidza yakakwana kurira kuburitsa. Iyo HF redhiyo, zvisinei, ine yakanyanya kushomeka nzvimbo pamusoro peiri yepamusoro yepamusoro mutauri. Kumwe kufungisisa kwandakaita kwaive kwekuti FM odhiyo paV / U kazhinji yakachena, kunyanya ichienzaniswa neSBB odhiyo paHF. Kubva pane izvi ini ndakasarudza kushandisa mutauri neiyo radio yeHF.
Nyaya - SKB 1SKB-R4S 4U Yakadzika Roto Rack
1U, 10.5, Yakadzika Masherufu
1U Kugogodza Panel
12V kuti 5V Converter Module
Magetsi - Powerwerx SS-30DV
Simba Backup Backup / Kugovera - Kurasikirwa Kwakaderera PWRgate (KI0BK)
Dhijitari Chinongedzo - Tigertronics SignaLink USB
Iyo Powerwerx magetsi inopa akakwana ekuenda kit. Iyo yakaoma kwazvo (6 ″ x 5 ″ x 2 ″), ine nyore Anderson powerpole kubatana kumberi (kuwedzera kumaterminal kumashure), uye kunogona kuchengetedzwa ne kuisa mabhureki.
Yaesu 450D inopa yakawanda bang-yako-yako-mbichana uye iri yakaenzana uye isingaremi zvakare (9lbs). Iyo yakavakirwa-mukati otomatiki kanyanga tuner haina iyo yakanyanya kuwanda renji (3: 1), asi ini handironge kuishandisa neasina-resonant antenna saka inofanirwa kuve inopfuura zvakakwana. Kushandisa tuner yemukati kwakandibvumidzawo kubvisa tuner yekunze kubva dhizaini, icho chaive chimwe chezvikonzero zvakakosha kuti ndakwanisa kukwana zvese mukati meiyo 4 unit kesi. Iyo 450D yakaiswa pamusoro ichishandisa 2.5 ″ simbi mumabhuraketi pamwe neM4 muchina screws uye 1/8 ″ nylon spacers kudzivirira mabhureki kubva kukwesha kuzorwa neiyo redhiyo yakavharwa. Ini pakutanga ndanga ndafunga kushandisa Yaesu nharembozha ye450D, zvisinei, zvakatora nzvimbo yakawandisa uye zvingadai zvakakanganisa magadzirirwo angu. Urongwa uhwu hunosimudza redhiyo nezve 1/2 ″ pasherufu iyo inofanirwa kupa yakawanda mweya.
Mune marongero ekutanga ndanga ndafunga kushandisa West Mountain Radio PWRgate uye Rigrunner ye backup simba switch uye kugovera magetsi. Zano iri rakaratidza kuti harishande nekuda kwekurambidzwa kwenzvimbo, zvisinei, ini ndakawana chinzvimbo chakakwana muLow Loss PWRgate. Icho chingangoita hafu saizi yeimwe backup switch switch uye inopa matatu mabudiro emagetsi anobvisa kudiwa kweRigrunner kana chimwe chikamu chekugovera. Ipo iyo LLPG yakatemerwa 3 amps vs iyo 25 amps yeimwe unit, izvi zvinofanirwa kunge zvichikwanira zvinangwa zvangu. Iyo LLPG haina kureruka uye yakaiswa uchishandisa inorema basa kaviri tsvimbo tepi.
Iyo Kenwood V71A yakaiswa pamusoro ichishandisa nhare inokwenenzvera. Iyo voltage inoshandura yeiyo USB hub yakaiswa pasherefu ichishandisa ayo ekumisikidza tabo. Imwe michina iri pamusoro pasherufu yakaiswa uchishandisa rinorema basa velcro (SignaLinks, USB hub) kana kaviri tsvimbo tepi (mutauri). Ndakawedzera mamwe mabara erabha kuzasi kwemukurukuri nekuti ini ndakawana mune bvunzo fittings kuti kubvumidzwa pakati pemukurukuri neiyo radio yeHF kwaingova 1/8 ″ uye ini ndanga ndisingade chero kusangana kwekusaziva pakati pavo kana nyaya iri kufamba.
Chikamu chekubvisa iyo Rigrunner kubva pakuvaka kwangu zvaireva kuti ndaifanirwa kupa dziviriro kune wiring yemagetsi nemaredhiyo. Izvi zvaiitwa vachishandisa inline fuse vabati vane ATC fesita fuses. Ini zvakare ndaive neyakaenzana huwandu hweradio interface uye tambo dzeUSB dzandinogona kubata. Masherufu andakasarudza akaburitswa izvo zvinoita kuti vakwanise kushandisa tambo tambo kuchengetedza zvese zviri munzvimbo. Ini ndaidawo kugadzira kit yekuenda yakatwasuka sezvinobvira kuungana nekukatanura. Chikamu chechinangwa ichi chaive kudzora tambo kusunga tambo kune mamwe masherufu. Izvi zvinoreva kuti kana ndichida kubvisa shefu, ini ndinongoda kudimbura tambo tambo dzakabatana pakati pemasherufu maviri (simba mbiri, mutauri mumwe odhiyo, imwe SignaLink), wobva wasunungura sherefu uye woiburitsa kunze. Hapana kucheka tambo tayi kuri madikanwa.
Ini ndaida chaizvo kugona kuisa maredhiyo maikorofoni mukati meyenda kit uye ndakaona kuti ndinogona kufonera V / U redhiyo mic kune imwe yeHF redhiyo's inosimudza mabhureki uye maikorofoni tambo yaizozokwana zvakanaka pakati pekupa magetsi neHF redhiyo. Izvi zvinonyanya kuve nyore sezvo maikorofoni jack iri muchinzvimbo chinoita kuti kuibvisa zvishoma marwadzo.
Iyo mic yeHF redhiyo yakaiswa uchishandisa velcro uye tambo mukati meiyo yekumberi kesi chivharo. Iyo chivharo chine kudzika kwakaringana iyo mic inogona kukwana pasina kubata pamberi pesimba magetsi. Iyo tambo yemagetsi AC tambo yemagetsi yakarongedzwa uchishandisa yakafanana tambo nzira seiyo HF mic, kunze kwekunge iri mune yekumashure kesi chivharo.
Chikamu chechinangwa chekushandisa diki rack kesi kwaive kudzikisa huremu pamwe nehukuru. Ini ndanga ndafungidzira kuti ndinogona kuvaka go kit uye ndochengeta huremu hwakatenderedza 35lbs. Mukupedzisira iyo kit inorema 40.5lbs. Ini ndinofunga chidzidzo chandakatora kubva pane ichi ndechekuti waya uye inokwidza Hardware inowedzera kusvika kune imwe huremu kupfuura iwe yaunogona kuona
Iyo kit iri yakananga chaizvo ku setup. Kana zvivharo zvadzima ini ndinongosunungura maikorofoni netambo yemagetsi. Ipapo ini ndinogona kubaya AC simba kana bhatiri, kusungira maantena angu, kubatanidza USB kune yangu laptop, uye ndiri mumhepo. Ndiri kufara kwazvo nekuwanda kwakaita kit iyi; nemabhodhi akabvisa kadhi iri chete 12 ″ rakadzika uye rinokwana nyore patafura diki. Iyo kit iri diki zvakakwana kuti inyatsobatanidzwa zvakakwana muye yangu chiteshi chemba, izvo zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kuve nechokwadi chekuti zvese zvinoshanda zvizere kune mashandiro emunda. Ndiri kufara kwazvo nemabatirwo akaitwa kit iyi uye ini ndakadzidza zvakawanda munzira, kunyanya nezve kurongedzwa kwemakesi uye zvikamu zvekusunga.
Kwidziridzo - Microphone Connector (Kukadzi 2017)
Mushure mekushandisa yangu Go Kit kwemavhiki mashoma ndakaona kuti iyo Kenwood V71 maikorofoni yekubatanidza yakanga isiri munzvimbo yakanaka. Iri kudivi redhiyo uye kana mic iri kushandiswa inokona uye neimwe nzira inosimbisa chinobatanidza maikorofoni. Kuti ndigadzirise mamiriro aya ndakafunga kuwedzera redhiyo mic mic kubatanidza kumberi kweGo Kit. Ini ndakazadzisa izvi ndichishandisa 1 tsoka ethernet chigamba tambo uye a RJ45 Inline Coupler. Iyo coupler yakaiswa pamusoro pesimba remagetsi riine rinorema basa kaviri tsvimbo tepi. Iyi gadziriro nyowani inoita kuti maikorofoni kubatana iwanikwe zvakanyanya uye kunoderedza zvakanyanya kunetseka pane zvinobatanidza.
Kwidziridzo - Kubatanidzwa neNew Power Bhokisi (Mbudzi 2017)
Chikamu chekuvaka yangu nyowani Simba Bhokisi zvaisanganisira kugadzirisa magetsi emagetsi eangu kit kit. Nekuti bhatiri switching zvinhu izvozvi zvabuda mubhodhi ini ndanga ndisisade iyo Low Loss PWRgate. Panzvimbo yaro Ini ndakaisa Powerwerx PD-4 kugovera block. Ini ndaishandisawo a powerpole inowedzera clamp uye chidimbu cheABS epurasitiki kugadzira gomo rekubuda kwesimba rangu rekupa. Izvi zvinondipa mapoinzi maviri akasimba ekubatana kubva kwandinogona kuisa waya kune rangu simba bhokisi. Kana kana ndiri kumhanya ndoga kubva pasimba remagetsi ndinogona kushandisa yakapusa jumper yekuzvimiririra iine kushanda.